माओवादीमा नवीकरण गराउने भन्दा नयाँ सदस्यता लिने बढी, १ लाख ७४ हजारले गराए सदस्यता नवीकरण | Safal Khabar
माओवादीमा नवीकरण गराउने भन्दा नयाँ सदस्यता लिने बढी, १ लाख ७४ हजारले गराए सदस्यता नवीकरण
विहीबार, ०४ कार्तिक २०७८, १४ : ५९
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको एक लाख ७४ हजार बढीले पुरानो सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । संगठन विभागका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार यो पुरानो सदस्यता नवीकरणको संख्या मात्र हो ।
माओवादी केन्द्रले अहिले भने अभिलेखीकरण गर्ने गरी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको कामअगाडि बढाएको छ । तर, उसको पुरानो सदस्यता नवीकरण गराउनेको संख्याभन्दा नयाँ सदस्यता लिनेको संख्यामा गुणात्मक वृद्धि आएको माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् ।
नयाँ सदस्यता लिनेको संख्या माओवादीमा ह्वात्तै बढेको संगठन विभागले जनाएको छ । खासगरि १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूले माओवादीको नयाँ सदस्यता बढी मात्रामा लिएको माओवादीको संगठन विभागले जनाएको छ । नयाँ सदस्यता वितरण भने अहिलेसम्म कति संख्यामा भयो भन्ने यकिन तथ्यांक संगठन विभागमा केन्द्रीकृत भइसकेको छैन । तर, सरदर पूराना सदस्य नविकरण भएकै सरह नयाँ सदस्यता वितरणको काम पनि भएको माओवादीको संगठन विभागका एक सदस्यले सफल खबर लाइ बताए ।
माओवादी प्रवक्ता कृष्णहादुर महराले भने पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म ६ लाख सम्म पार्टी सदस्यता वितरणको काम सक्ने वताएका छन् । माओवादीले पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रमा लामो समयदेखि देशभर पार्टी सदस्यता कति छन् ? उनीहरूको नवीकरणको अवस्था के छ ? भन्ने यकिन तथ्यांक थिएन । तर, अहिले उसले कम्युटर प्रणालीबाटै देशभरबाट सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यताको ‘इन्ट्री’ गर्ने काम गरिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्यता ४ लाख बढी रहेको बताउँदै आएको थियो । माओवादी र एमाले एकता हुँदा दुवै पार्टीका गरी करिब ८ लाखमाथि पार्टी सदस्यता रहेको अनुमान गरिएको थियो । एमालेको पार्टी सदस्यको भने यथार्थ तथ्यांक रहेकाले संख्या निकाल्न सकिए पनि माओवादीतर्फको तथ्यांक अभिलेखीकरण नहुँदा संख्या यकिन गर्न कठिन भएको थियो